Chest Freezer Glass Door Vagadziri uye Suppliers - Wholesale Chest Freezer Glass Door Suppliers
Sliding Chest Freezer Girazi Door
YB Sliding Chest Freezer Glass Door iri kushandisa yakakwidziridzwa 4mm inoyangarara yakadzikama Low-E girazi, inodzivirira kudhumhana, inoputika-inoputika nekuoma kwegirazi remhepo. Inogona kusangana nezvinodiwa tembiricha kubva -30 ℃ kusvika 10 ℃. Iyo furemu zvinhu zvine hushamwari chikafu giredhi PVC ine ABS kona, yakazara jekiseni girazi gonhi rinogonawo kupihwa kuti isangane neako eesthetic chinodikanwa. Slide kumusoro-pasi kana kuruboshwe-kurudyi ndiyo yedu yakajairwa vhezheni, locker uye mwenje we LED inosarudzika.
YB Island Freezer Glass Door iri kushandisa yakakwidziridzwa 4mm inoyangarara yakadzikama Low-E girazi, inodzivirira kudhumhana, inoputika-inoputika nekuoma kwegirazi remhepo. Inogona kusangana nezvinodiwa tembiricha kubva -30 ℃ kusvika 10 ℃. Iyo furemu zvinhu zvine hushamwari chikafu giredhi PVC ine ABS kona, yakazara jekiseni girazi gonhi rinogonawo kupihwa kuti isangane neako eesthetic chinodikanwa. Slide kumusoro-pasi kana kuruboshwe-kurudyi ndiyo yedu yakajairwa vhezheni, locker uye mwenje we LED inosarudzika.
YB Chest Freezer Sliding Door iri kushandisa yakakwidziridzwa 4mm inoyangarara yakadzikama Low-E girazi, inodzivirira kudhumhana, inoputika-inoratidza kuoma kwemhepo yemotokari. Inogona kusangana nezvinodiwa tembiricha kubva -30 ℃ kusvika 10 ℃. Iyo furemu zvinhu zvine hushamwari chikafu giredhi PVC ine ABS kona, yakazara jekiseni girazi gonhi rinogonawo kupihwa kuti isangane neako eesthetic chinodikanwa. Slide kumusoro-pasi kana kuruboshwe-kurudyi ndiyo yedu yakajairwa vhezheni, locker uye mwenje we LED inosarudzika.
YB Chest Freezer Flat Glass Door iri kushandisa yakakwidziridzwa 4mm inoyangarara yakadzikama Low-E girazi, inodzivirira kudhumhana, inoputika-inoputika nekuoma kwegirazi remhepo. Inogona kusangana nezvinodiwa tembiricha kubva -30 ℃ kusvika 10 ℃. Iyo furemu zvinhu zvine hushamwari chikafu giredhi PVC ine ABS kona, yakazara jekiseni girazi gonhi rinogonawo kupihwa kuti isangane neako eesthetic chinodikanwa. Slide kumusoro-pasi kana kuruboshwe-kurudyi ndiyo yedu yakajairwa vhezheni, locker uye mwenje we LED inosarudzika.
YB Chest Freezer Sliding Glass Door iri kushandisa yakakwidziridzwa 4mm inoyangarara yakadzikama Low-E girazi, inodzivirira kudhumhana, inoputika-inoputika nekuoma kwegirazi remhepo. Inogona kusangana nezvinodiwa tembiricha kubva -30 ℃ kusvika 10 ℃. Iyo furemu zvinhu zvine hushamwari chikafu giredhi PVC ine ABS kona, yakazara jekiseni girazi gonhi rinogonawo kupihwa kuti isangane neako eesthetic chinodikanwa. Slide kumusoro-pasi kana kuruboshwe-kurudyi ndiyo yedu yakajairwa vhezheni, locker uye mwenje we LED inosarudzika.
YB Curved Sliding Glass Door iri kushandisa yakakwidziridzwa 4mm inoyangarara yakadzikama Low-E girazi, inodzivirira kudhumhana, inoputika-inoputika nekuoma kwegirazi remhepo. Inogona kusangana nezvinodiwa tembiricha kubva -30 ℃ kusvika 10 ℃. Iyo furemu zvinhu zvine hushamwari chikafu giredhi PVC ine ABS kona, yakazara jekiseni girazi gonhi rinogonawo kupihwa kuti isangane neako eesthetic chinodikanwa. Slide kumusoro-pasi kana kuruboshwe-kurudyi ndiyo yedu yakajairwa vhezheni, locker uye mwenje we LED inosarudzika.
Flat Chest Freezer Girazi Door
YB Flat Chest Freezer Girazi Door iri kushandisa yakakwidziridzwa 4mm inoyangarara yakadzikama Low-E girazi, inodzivirira kudhumhana, inoputika-inoputika nekuoma kwegirazi remhepo. Inogona kusangana nezvinodiwa tembiricha kubva -30 ℃ kusvika 10 ℃. Iyo furemu zvinhu zvine hushamwari chikafu giredhi PVC ine ABS kona, yakazara jekiseni girazi gonhi rinogonawo kupihwa kuti isangane neako eesthetic chinodikanwa. Slide kumusoro-pasi kana kuruboshwe-kurudyi ndiyo yedu yakajairwa vhezheni, locker uye mwenje we LED inosarudzika.
Ice Cream Chest Freezer Yakakomberedzwa Pamusoro Sliding Glass Door
YB Ice Cream Chest Freezer Yakakomberedzwa Pamusoro Inotsvedza Girazi Door iri kushandisa yakakwidziridzwa 4mm inoyangarara yakadzikama Low-E girazi, inodzivirira kudhumhana, inoputika-inoratidza kuomarara kwemotikari windshield. Inogona kusangana nezvinodiwa tembiricha kubva -30 ℃ kusvika 10 ℃. Iyo furemu zvinhu zvine hushamwari chikafu giredhi PVC ine ABS kona, yakazara jekiseni girazi gonhi rinogonawo kupihwa kuti isangane neako eesthetic chinodikanwa. Slide kumusoro-pasi kana kuruboshwe-kurudyi ndiyo yedu yakajairwa vhezheni, locker uye mwenje we LED inosarudzika.
Pamusoro Vhura Chest Freezer Girazi Door
YB Yepamusoro Yakavhurika Chest Freezer Girazi Door iri kushandisa yakakwidziridzwa 4mm inoyangarara yakadzikama Low-E girazi, inodzivirira kudhumhana, inoputika-inoputika nekuoma kwegirazi remhepo. Inogona kusangana nezvinodiwa tembiricha kubva -30 ℃ kusvika 10 ℃. Iyo furemu zvinhu zvine hushamwari chikafu giredhi PVC ine ABS kona, yakazara jekiseni girazi gonhi rinogonawo kupihwa kuti isangane neako eesthetic chinodikanwa. Slide kumusoro-pasi kana kuruboshwe-kurudyi ndiyo yedu yakajairwa vhezheni, locker uye mwenje we LED inosarudzika.